Fudan University Shanghai Cancer Center - Shenzhen Doneax Sayenzi uye Technology CO., LTD
Fudan University Shanghai Cancer Center (FUSCC) ndeimwe yemabhajeti manejimendi zvikamu pasi peNational Health Commission. Chikamu chekuvaka matrustee chakavakwa pamwe chete nebazi rezvedzidzo, National Health Commission uye neHurumende yeMaguta eShanghai. Iyo yakavambwa munaKurume 1, 1931. FUSCC ikozvino yakagadziriswa kuve yegiredhi-A tertiary chipatara chakabatanidzwa mukubatanidzwa kweclinical tsika, zvekurapa dzidzo, oncologic research uye cancer kudzivirira.
Pakupera kwe2019, chipatara chave chavhura inopfuura mabhedi zviuru zviviri. FUSCC inoumbwa nemadhipatimendi makumi maviri nematanhatu: Dhipatimendi reMusoro & Neck Kuvhiya, Dhipatimendi reChipatara Chekuvhiya, Dhipatimendi rekuvhiya Thoracic, Dhipatimendi reGastric Surgery, Dhipatimendi re Kuvhiya Kwakachena, Dhipatimendi reUrology, Dhipatimendi rePancreatic Kuvhiya, Dhipatimendi reHepatic Kuvhiya, Dhipatimendi reNeurosurgery, Dhipatimendi reBone & Soft Tissue Kuvhiya, Dhipatimendi reGynecologic Oncology, Dhipatimendi reMishonga Oncology, Radiotherapy Center, Dhipatimendi reTCM-WM Yakabatana Oncology, Dhipatimendi reKurapa Kwakakwana, Dhipatimendi reAnesthesiology, Dhipatimendi reInternational Therapy, Dhipatimendi rePathology, Dhipatimendi reFarmacy, Dhipatimendi reKiriniki Laboratories, Dhipatimendi reEndoscopy, Dhipatimendi reUltrasound Diagnosis, Dhipatimendi Rekuongorora Radiology, Dhipatimendi reNyukireya Mishonga, Dhipatimendi reCardio- Basa rePulmonary, uye Dhipatimendi reKiriniki Nutriology.
KuFUSCC, oncology uye pathology zvinozivikanwa semutemo wakakosha pakudzidza nebazi rezvedzidzo, zvichiteerana; oncology, pathology uye TCM-WM Yakabatanidzwa Mushonga, seyenyika yakakosha kiriniki kuranga, zvichiteerana; uye zamu oncology, radiotherapy, pathology, seyakakosha kiriniki kuranga pasi peNational Health Commission. Boka rekutanga uye rekiriniki rekutsvagisa nezve gomarara repazamu rakanyorwa zviri pamutemo sechikwata chine hunyanzvi nebazi rezvedzidzo. Munyika, FUSCC inobvumidzwa kuve nematatu emakiriniki ekurapa oncology, radiotherapy uye zamu oncology, uye kunyanya kuve nemaviri emakiriniki ekurapa nzvimbo pamberi pechirwere chakaipa uye chirwere chemuviri. Iyo hosha yehutachiona inozivikanwa zvakare zviri pamutemo kuve manisipiti kiyi hutano kuranga; oncology yayo, pathology, radiology, gynecologic oncology uye thoracic oncology, kuve mashanu emakanzuru akakosha ekuranga, ayo akabatanidzwawo neShanghai Pathology Quality Control Center, Radiotherapy Quality Control Center, Cancer Chemotherapy Quality Control Center uye Shanghai Anticancer Association.